Fitsidihana toro-hevitra mahasoa, lesona sy loharano hafa hanampy anao hanomboka amin'ny Microsoft Windows.
Ny Microsoft dia tokony hamoaka ny vaovao farany amin'ny Windows 10 19H1 ho an'ny vahoaka amin'ny lohataona 2019. Na dia naneho ny sasany amin'ireo fanovana aza i Microsoft, dia mbola miasa ao ambadiky ny sehatra ny orinasa hanatsarana Windows amin'ny famolavolana voalamina. Na izany aza, toa ...
12 Useful Microsoft Word Tips sy Tricks
Ny fahazoanao tombontsoa dia mampiasa ny Microsoft Word ianao ankehitriny, na mety hampiasa izany amin'ny ho avy. Izy io no mora indrindra mpampiasa ny tenimiafina amin'ny Windows, noho izany dia ny fianarana toro-hevitra mahasoa Microsoft Word hanararaotra dia afaka manampy amin'ny fanatsarana ny vokatrao sy haingana ...
Ny Windows 10 1809 dia manohy ny fiasco - Ny October 2018 Update dia mamaky ihany koa ny Windows Media Player
Ny Windows 10 October 2018 Update dia iray amin'ireo olana goavana indrindra momba ny Microsoft hatramin'izay. Toa isaky ny manery ny famoahana ny orinasa dia misy olana hafa indray. Ny Windows 10 October 2018 Update dia efa nahatonga olana tamin'ny Apple iCloud, fikambanan'ny fichier, ...
Windows 10 - fitaovana tsara indrindra ho an'ny admin anao
Windows 10 - fitaovana tsara indrindra ho an'ny admin anao. Updated: November 12, 2018 Miasa miaraka amin'i Windows 10 dia zava-mahaliana mahaliana. Matetika ny fonctiona dia miafina na mikendry fikorontanana, manao asa fitantanana izay sarotra kokoa raha oharina amin'ny fanontana teo aloha tamin'ny Windows. Avy eo, satria ity rafitra ity dia ...
Hamaha ny Bugcode 0xA - IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL amin'ny Windows 10
Raha ny momba ny haavon'ny fitaovana, dia natao ny fisorohana mba tsy hanakatonana ny fangatahana resource. Amin'ny teny tsotra, dia ampiasaina handravana loose tsy misy farany. Ireo mpandrafitra ihany koa dia nanangana ny ambaratonga ho laharam-pahamehana. Antsoina koa hoe Request Interrupt ...
Ahoana ny fametrahana Python amin'ny Windows ho an'ny fianarana milina?
Ny fianarana milina dia miankina amin'ny fangatahana fampiharana artifisialy (AI) izay tsy mitaky fandaharana mazava mba hitondra fanatsarana. Izany dia manondro ny fahafahan'ny masinina hanatsara ny fiainany amin'ny alalan'ny traikefa. Ity lohahevitra ity dia mifantoka indrindra amin'ny fampandrosoana fampiharana rindrambaiko izay ...
Ny Microsoft 10 Oktobra 2018 Update dia mijanona indray
Tamin'ny herinandro lasa teo, Microsoft dia namela ny hamoaka indray ny Windows 10 October 2018 Update farany. Ny version 1809 dia nanomboka nipoitra tany am-piandohan'ny volana oktobra saingy taorian'ny fanehoan-kevitra momba ny bug dia nanomboka tsara dia napetrak'i Microsoft teo amin'ny sehatra iraisampirenena izany. Azo inoana fa ny olana lehibe indrindra amin'ny ...
Ahoana no hamahana ny Windows Update Error 80244019
Windows Update dia ny fametrahana ny zava-drehetra farany amin'ny Windows amin'ny Microsoft. Matetika ny mpampiasa dia mahazo fampahalalana matetika noho io servisy Windows Update io. Ity hetsika Windows Update ity dia miankina amin'ny tolotra marobe toy ny BITS na Background Intelligent Transfer Service, Windows Service Service, Windows Server Update Service ...
Ny fomba fiovana eo anelanelan'ny Windows 10 User dia mifandray amin'ny fomba mora
Ny windows 10 dia manana ny fanovan'ny Fast User Switching ao anatiny izay mahatonga azy ho mora ny manova ny kaonty ka tsy mila manoratra ny fotoana rehetra. Raha manana ordinatera ifampizarana ao an-tranonao ianao, dia tsara ny mamorona kaonty user ho an'ny olona tsirairay. ...
Nividy FSLogix i Microsoft mba hanamafisana ny fahombiazan'ny Office 365 virtualisation
Ny teknolojian'ny FSLogix dia hanatsara ny fotoana ahafahana mandefa mpampiasa mpampiasa ao amin'ny Outlook sy OneDrive Microsoft dia nahazo ny FSLogix fampiasana fampiharana mba hanatsarana ny hafainganam-pandehan'ny mpampiasa amin'ny fampiharana, anisan'izany ny Outlook sy OneDrive. Ny vahaolana dia natokana ho an'ny tontolo manodidina ny rahona ...
1 2 3 4 ... 145 Manaraka
SSD nbsp Windows 8 File haino aman-jery sosialy Plugin tahirin-kevitra takelaka fikirakirana HTTP CentOS hametraka USB Android web browser Apple Watch vaovao farany rafitra Samsung Galaxy PPA Apache Malagasy Bible 'App Firefox Toetoetra IP adiresy One ' MySQL "PC Server Bing Time fifamoivoizana rindrambaiko Plugins lalao bilaogy lalao OS X ram raki-daza Apps WordPress PDG Ubuntu 14.04 Screen Google Microsoft SEO taona 04 Ubuntu 16 Support iPhone Fitaovana finday CentOS 7 Command Unité centrale Database command line fitaovana Facebook Phone 10 ubuntu 15.04 Linux Debian Windows Phone SSH bilaogy loharano misokatra fanamarinana Linux Ubuntu Systems endri-javatra Windows 10 famotsorana Video HTTPS fitaovana finday Chrome YouTube MAMAKA web server Linux Mint finday avo lenta API toe-tsaina Samsung Company Twitter Users paoma fitaovana Ubuntu PHP Microsoft Windows afa-po fitaovana Nginx app store Cortana Performance famerenana fikarohana windows update Unix Windows HTML Ubuntu 14.10 Rafitra fikirakirana GNOME Up "